China Ampoule Kuzadza Production Line vagadziri uye vanotengesa | IVEN
Injekiseni Liquid Kugadzira Line - Ampoule SVP
Iyo Ampoule yekuzadza yekugadzira tambo inosanganisira yakatwasuka ultrasonic yekuwachina muchina, RSM sterilizing yekuomesa muchina uye AGF yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina. Iyo yakakamurwa kuita yekuwachone zone, sterilizing zone, yekuzadza uye yekuisa chisimbiso nzvimbo. Iyi compact tambo inogona kushanda pamwechete pamwe nekuzvimiririra. Inofananidzwa nevamwe vagadziri, yedu michina ine yakasarudzika maficha, kusanganisira yakazara dhizaini idiki, yakakwira otomatiki & kugadzikana, yakaderera mhosva rate uye yekugadzirisa mutengo, uye nezvimwe.
Kugadzirwa kwegirazi ampoule.
Inotora yekuwacha tekinoroji yemvura mbiri uye 2 mweya pamadziro ekunze uye 3 mvura uye 4 mhepo pamadziro emukati.
Mapoka matanhatu ekupfekedza tsono ane njanji yekuwachisa, tsono dzesproti dzinotora yakazara 316L simbi isina simbi. Servo control system + Sleeve inotungamira uye bhodhi rinotungamira rinopa chinzvimbo chakaringana kune tsono yechipfapfaidzo, zvinodzivirira kukuvara kwetsono kunokonzerwa nekusaenzana.
WFI uye yakamanikidzwa mweya iri pakati, inoderedza kushandiswa.
Maitiro ekuwachisa akajairwa:
3.Recycled mvura: mukati yekugeza, kunze kwekuwacha
Mhepo yakamanikidzwa: mukati mekuvhuvhuta
5.Recycled mvura: mukati yekugeza, kunze kwekuwacha
7.WFI: mukati mekugeza
8.Compressed mhepo: mukati vachiridza, kunze vachiridza
9.Compressed mhepo: mukati ichivhuvhuta, kunze vachiridza
Mabhodhoro akagezwa anopinda mumushini wekuchenesa & wekuomesa zvishoma nezvishoma zvakaenzana kuburikidza nemabhanhire mesh. Pfuura preheating zone, yakanyanya tembiricha sterilizing nzvimbo, inotonhora nzvimbo zvishoma nezvishoma.
Unyoro hunonetesa fan hunosvitsa hutsi hwehombodo kune yekunze, munzvimbo yepamusoro tembiricha, mabhodhoro akaomeswa maminetsi mashanu pasi pe300-320 ℃. Iyo inotonhorera zone inotonhodza iyo sterilized vials, uye pakupedzisira kusvika kune tekinoroji chinodikanwa.
Iyo yose yekuomesa uye yekudzvinyirira maitiro inoitwa pasi peicho chaicho nguva yekutarisa.
Kuzadza & Kuisa chisimbiso
Muchina uyu unoshandisa nzira yekuendesa nhanho-nhanho pamwe nehurongwa hwevheranda.
Muchina unozvipedza wega kugadzirwa kwese kuita:
Auger kuendesa - Mberi nitrogen kuchaja (kusarudza) - Kugadziriswa kwekuzadza - Kumashure nitrogen kuchaja (sarudzo) - Kuchenesa - Kuisa chisimbiso - Kuverenga - Kupedza zvigadzirwa zvinoburitsa.
Ampoule Kuzadza Kugadzira Line Anobatsira
1. Iyo compact tambo inoziva imwechete yekubatana, kuenderera kushanda kubva kusuka kuwacha, sterilizing, kuzadza nekuisa chisimbiso. Yose kugadzirwa muitiro anoziva rokutsvaira oparesheni; inodzivirira zvigadzirwa kubva pakusvibiswa, inosangana neGMP yekugadzira chiyero.
2. Iyi tambo inotora mvura uye yakamanikidza mweya muchinjikwa kumanikidza jet kuwacha uye ultrasonic geza pane inverted nyika. Iyo yekuchenesa mhedzisiro yakanaka kwazvo.
3. Iyo yekupedzisira filtration tekinoroji inoiswa pane yekuwacha yemuchina firita. Iyo yakachena uye chena kugeza mvura uye yakadzvanywa mweya inowanikwa kuburikidza nechisimba firita, iyo inogona kuvandudza kujeka kwebhodhoro rakashambidzwa.
4. Bhodhoro mune feed auger uye nyeredzi vhiri rinosangana, iyo auger nzvimbo idiki. Ampoule inogona kufamba yakatwasuka. Ampoule inogona kuendesa yakagadzikana uye haigone kuputswa.
5. Vanyengeri vanogadzira ndeimwe divi kugadzirisa. Iyo nzvimbo yakanyatsoita mushe. Vanyengeri vakapfeka humbowo. Kana uchichinja zvemahara ma manipulators hapana chikonzero chekutambanudza nekutendeuka. Iko kutendeuka kwekutakura kusanganisa iyo yekuchenesa mvura.
6. Iyo ampoule inoomeswa nemhepo inopisa laminar kuyerera sterilization musimboti. Kugovera kwekupisa kwakanyanya kunyangwe. Iyo ampoule iri pasi peiyo HDC yakakwira tembiricha sterilization mamiriro, iyo inosangana neyakajairwa GMP.
7. Iyi michina inotora yakashata yekumanikidza yekuisa chisimbiso musimboti wekusimbisa yakanyanya kushanda firita iyo inoshandiswa kuchenesa mugero. Sefa iri nyore kuisa iyo inogona kuve nechokwadi chezana remamiriro ekuchenesa.
8. Iyo michina inotora hinge mhando chigaro kupisa uye yakatwasuka inopisa mweya fan chimiro. Kugadziriswa kwemidziyo kuri nyore uye kunochengetedza vashandi.
9. Ichi chishandiso chinotora cheni inoendesa bhandi nerutivi. Iyo inoendesa bhandi haizove isipo track, anti-creeper, hapana bhodhoro rinodonha.
10. Iyo michina inotora tekinoroji yepamberi senge mufti-tsono yekuzadza, kumberi uye kumashure nitrogen kuchaja uye waya yekudhirowa yekuisa chisimbiso, izvo zvinogona kusangana nemhando yemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa.
11. Iyo yekuzadza-chisimbiso muchina inotora balcony chimiro. Nyeredzi vhiri mune yekudyisa uye yekuendesa mabhodhoro ichienderera, kumhanya kwemidziyo kwakadzikama uye kushoma kuputsika kwebhodhoro.
12. Midziyo iyi ndeyeyese. Iyo haigone kushandiswa kune 1-20ml ampoule. Kuchinja zvikamu zviri nyore. Zvichakadaro, iyo michina inogona kushandiswa sevial ​​kuwacha, kuzadza uye kubaya compact mutsetse nekuchinja imwe furu uye kunze kwekudya vhiri.
Zvinoshanda nokurondedzerwa 1-20ml B mhando ampoules inosangana neyakajairwa GB2637.
Kunonyanyisa chinzvimbo 7,000-10,000pcs / h
WFI kushandiswa 0.2-0.3Mpa 1.0 m3 / h
Yakamanikidzwa mweya kunwa 0.4Mpa 50 m3 / h
Simba remagetsi CLQ114Vertical Ultrasonic Washing Machine: 15.7KW
RSM620 / 60 Sterilizing uye kuomesa muchina 46KW, kudziyisa simba: 38KW
AGF12 Ampoule yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina 2.6KW
Zviyero CLQ114Vertical Ultrasonic Washing Machine: 2500 × 2500 × 1300mm
RSM620 / 60 Sterilizing uye kuomesa muchina: 4280 × 1650 × 2400mm
AGF12 Ampoule yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina: 3700 × 1700 × 1380 mm
Kurema CLQ114Vertical Ultrasonic Washing Machine: 2600 Kg
RSM620 / 60 Sterilizing uye nekuomesa muchina: 4200 Kg
AGF12 Ampoule yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina: 2600 Kg
Pashure: Vial Liquid Kuzadza Kugadzira Line
Zvadaro: PP Bhodhoro IV Solution Kugadzira Line
Disposable Syringe & Tsono Production Line, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Ampoule Muchina À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Singer, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Yakagadzirirwa-Syringe Machine,